काठमाडौं र भक्तपुरबाट पाँचजना पक्राउ ! डाक्टर बन्न यस्तो पो गर्दा रहेछन – Sandes Post
April 2, 2022 614
एमबीबीएस अध्ययनका लागि लिने प्रवेश परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी भेटिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा नक्कली परीक्षार्थी भेटिएका हुन् । उनीहरूलाई पक्राउ गरेर ल्याउने काम भइरहेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लाबाट पाँच जनाभन्दा बढी नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका हुन् ।
‘हामीले पाँच जना भन्दा बढी नक्कली परीक्षा समाएका छौँ । अहिले भेरिफाई गर्ने काम भइरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूलाई महाशाखा ल्याउने काम पनि भइरहेको छ । केही समयमा यकिन तथ्याङ्क आउँछ’, एसपी कोइरालाले भने ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आजदेखि चिकित्सा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । पक्राउ परेका मध्ये केही नक्कली परीक्षार्थी नै छन् भने केही परीक्षार्थी नै भएका तर, अर्का व्यक्तिलाई परीक्षा दिन लगाएका छन् ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा आज भोलि र पर्सि गरेर तीन दिन हुनेछ । स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ३४ हजार ६६५ परीक्षाहरू सहभागी हुनेछन् । आज पहिलो दिन १९ हजार ५०८ जना परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।
त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटा जिल्लामा मात्र परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् । परीक्षाका लागि उपत्यकामा १११ परीक्षा केन्द्र तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।
Prevमहल जस्तो बंगला छ, लग्जरी गाडीको लाइन, कति कमाउँछन अल्लु अर्जुन ? कति छ सम्पति ?
Nextअभिनयले करोडौंको मालिक बनायो काली बुढीलाई,घर पुग्दा यस्तो देखियो (भिडियो हेर्नुस्)
राप्रपाका उम्मेदवारले कसम खाए अनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्ने जिम्मा मेरो : रेखा थापा
कारभित्र शारिरिक सम्वन्ध राख्दा यी १५ वर्षीया किशोरीको मृत्यु, यस्तो रहेछ कारण
९ श्रीमतीका श्रीमान् भन्छन्- म सबै श्रीमतिसँग बच्चा जन्माउन चाहन्छु।’